पैसाका लागि आफ्नै आमाको ८० बर्षको बिदेशीसँग बिहे गराईदिए ! झोला बोकेर आएका ज्वाईँ कार चढेर निस्किए | Public 24Khabar
Home News पैसाका लागि आफ्नै आमाको ८० बर्षको बिदेशीसँग बिहे गराईदिए ! झोला बोकेर...
पैसाका लागि आफ्नै आमाको ८० बर्षको बिदेशीसँग बिहे गराईदिए ! झोला बोकेर आएका ज्वाईँ कार चढेर निस्किए
Previous articleभर्खरै हेर्नुहोस्, ड’रलाग्दो भयो भि’डन्त, ३१ रा’उण्ड प्र’हार, डी’एसपीसहित ४० बढी घा’इते !
Next articleबिष्णु पौडेलको भण्डा*फोर गर्दै बाघ झैँ गर्जिए ज्ञानेन्द्र शाही ! चोरलाई पनि कारबाही भएनन् Gyanendra